Home Wararka Al Shabaab oo qarax ka geystay gudaha iyo xadka u dhaxeeya Kenya...
Al Shabaab oo qarax ka geystay gudaha iyo xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya
Sida lagu soo waramaayo inka badan saddex qof ayaa ku geeriyotay qaar kale dhaawac ayaa soo gaaray, kadib qarax ka dhacay xadka ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Qaraxa oo ahaa nooca miinada ee dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday gaari ay la socdeen dadkaasi oo ahaa qandaraasleyaal dhisayey darbiga ay Kenya ka sameyneyso xuduuda ay wadaagaan dalalka dariska ah ee Soomaaliya iyo Kenya.
Dowlada Kenya oo ka hadashay qaraxaasi ayaa ku eedeeysey inay ka dambeysay kooxda Al-Shabaab oo weeraro culus ka fulisa gudaha dalkaasi. Sidoo kale saraakiisha ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortegi doonaan weerarada khasaaraha geysta ee ka dhaca deegaanada u dhow xadka Soomaaliya
Waxa la sheegaya in qaraxa si gaar ah uga dhacay gobolka Xeebta ee Laamu, waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa Booliiska oo baaritaano ka sameeyey halkaasi. Inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ka fuliya gudaha dalka Kenya, iyaga oo beegsada ciidamada dalkaas iyo gawaarida dadweynaha.